Daacish oo sheegatay qaraxyadii mataanaha ee ka dhacay Kampala | Universal Somali TV
Daacish oo sheegatay qaraxyadii mataanaha ee ka dhacay Kampala
Ururka isku magacaabay Dowladda Khilaafada Islaamka (Daacish) ayaa xalay sheegtay masuuliyadda qaraxyadii mataanaha ahaa ee Talaadadii shalay gilgilay magaalo madaxda dalka Uganda ee Kampala.
Sheegashada Daacish waxay imaanaysaa, xilli Uganda ay qaraxyadaasi ku eedeysay Kooxda Allied Democratic Forces (ADF), oo lala xiriiriyo Daacish.
Ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Uganda ayaa Magaalada Kampala ka wada hawlgalo ay magaaladaasi kaga baadi-goobayaan walxaha qarxa. Ciidamada ayaa la arkayaa iyagoo wata eeyaha uriya qaraxyada.
Inta laga warqabo lix qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi oo saddex ka mida ay yihiin raggii weerarada ismiidaaminta fuliyay, halka 33 kalena ay ku dhaawacantay.
Uganda ayaa u muuqato mid ay qaraxyada ku soo badanayaan. Bishii hore ee October ayay ahayd markii laba qarax ay ka dhaceen dalkaasi, oo mid ka mida laga gaystay goob lagu caweeyo oo Magaalada Kampala ku taala.
Warbaahinta Uganda ayaa ku waramaysa in qaraxyadii ugu dambeeyay ee shalay ka dhacay Kampala ay baqdin geliyeen dadka dalkaasi, marka aad eegto goobaha ay ka dhaceen qaraxyadaasi oo bartamaha magaalada ah. Waa goob ay ku yaallaan xafiisyo muhiim ah oo dowladeed iyo wasaarado, waana meel ay ciidamada amniga ku badan yihiin.
Kan-xigaXoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka...
Kan-horeBooliska Ingiriiska oo saddex nin u s...
62,797,113 unique visits